Raw Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ (90045-23-1) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ
Rating: SKU: 90045-23-1. Category: Ọla abụba
AASraw nwere njikọ na ikike mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ (90045-23-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Garcinia cambogia wepụ ntụ emere site na osisi tamarind ma jiri ya na otutu ihe eji ere ahia dika ihe kwesiri ibu. Garcinia Cambogia bụ osisi nke toro na India na Asia ruo ọtụtụ narị afọ. Garcinia Cambogia bụ obere ugu dị ka mkpụrụ osisi na-enweta ugbu a na ndị na-eri nri ndị Western na ndị ọkachamara n'ihe banyere nri n'ihe okike.
Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ
Raw Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ bụ isi ihe
aha: Garcinia cambogia wepụ ntụ
Usoro Molecular: C16H21BrClNO4
agba: Botanicals, Powders na Extracts, Natural Ngwaahịa
Raw Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ na ngwụcha ọnwụ
Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ (CAS 90045-23-1), HCA, Garcinia cambogia, Gambooge, Malabar Tamarind, Goraka, Brindle Berry, Brindall Berry
Ọ bụrụ na ị kpebie na ị ka chọrọ ịnwa ịnweta GC maka ọnwụ ma ọ bụ uru ndị ọzọ, lee ihe ị chọrọ ịma gbasara usoro ọgwụgwọ maka ngwaahịa ndị nwere HCA:
(1) Ihe omumu nke eji GC ejiri otutu otutu doses, ebe obula site na gram rue gram 2.8 kwa ubochi.Uzo eji eme ihe dika 250-1000milligrams kwa ubochi.
(2) Ọga ọmụmụ ihe dịgasị iche iche, site na iji GC n'etiti abụọ ruo 12 izu n'otu oge.
(3) A na-amabeghị ọgwụ kacha mma nke HCA. O doro anya na ọ bụrụ na nnukwu usoro HCA ga-apụta na HCA nwere ike ịba ụba.
(4) O yiri ka ọ bụ njikọ dị ịrịba ama n'etiti usoro dose nke HCA na nha anụ ahụ, nke pụtara na mgbatị dị elu nwere ntakịrị mmetụta.
(5) Garcinia cambogia na-aga n'ihu na-abụ ihe mgbakwunye nke a na-ejikarị eme ihe n'ọmụmụ ihe maka inye HCA, ma ọ bụghị GC, HCA pụkwara ịchọta ihe mgbakwunye sitere na osisi Hibiscus subdariffa.
(6) Ebe ọ bụ na ọtụtụ nchọpụta enyochawo ihe GC mere maka ihe dị ka izu asatọ, ndị na-eme nnyocha kwenyere na nke a bụ "oge dị mkpirikpi iji nyochaa mmetụta nke HCA na ibu arọ ahụ."
Ihiehie na ebe dị nchebe, zere ịzụrụ garcinia cambogia "usoro" ma ọ bụ "ngwakọta ngwakọta," nke nwere ike ghara ịkọcha ihe ndị ọzọ metụtara ma ọ bụ ọkwa ziri ezi nke HCA. Ọtụtụ ndị na-emepụta Ngwá ọrụ na-emepụta usoro nchịkọta nke naanị na-eji akụkụ dị arọ nke ihe mpempe akwụkwọ ọrụ ma ọ bụ dose iji mee ka ọnụahịa dị ala. Na-agụ akwụkwọ mgbe niile ma chọpụta okwu "ọcha garcinia cambogia (CAS 90045-23-1)" na "hydroxycitric acid (ma ọ bụ HCA) wepụ" (nke a kwesịrị ịdị na 50 pasent na 60 pasent nke ngwaahịa ahụ). Ọ bụrụ na ịzụta ngwakọta ma hụ ihe nrụpụtara edepụtara na-enweghị ego, nke ahụ nwere ike ịbụ ọkọlọtọ ọbara ọbara na ị maghị ihe ị na-enweta.
Ịdọ aka ná ntị na Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ekwu na ha enweghi mmetụta ọ bụla ọ bụla site na iji GC, ndị ọzọ enweela ahụmahụ dị iche iche. Nke a bụ otu akụkọ na-agbaghasị gbasara iji Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ nke ị nwere ike ị gaghị anụ banyere ya: Ọ dịkarịa ala, ọtụtụ ndị ọrịa na-agbaba na ụlọ ọgwụ na-adaba na imeju na mkpa mgbochi imeju imeju.
Otu akwụkwọ 2016 bipụtara site na Transplantation Centre na Ụlọ Ọgwụ Mayo na-akọ na ọtụtụ nde ndị America na-ejikarị ọgwụ ndị na-eme nri, na-abụkarị ụdị ọgwụ, ma ha amaghị mmetụta ha. Ọtụtụ ọgwụ ọjọọ na-akpata ihe ize ndụ ndị nwere ike ịchọta ma bụrụ "ndị metụtara hepatotoxicity na nnukwu mmerụ ahụ."
N'ihe gbasara garcinia cambogia, enwere ike iji ya mee ihe na-adịghị mma. Ụfọdụ ndị na-emepụta ụlọ ahịa na-akwado na ha na-ewere ọtụtụ doses ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị. dịka ọmụmaatụ 30 na 60 nkeji tupu nri ọ bụla ruo izu asatọ na 12. E wezụga imeju imeju, ndị ọzọ garcinia cambogia mmetụta ndị nwere ike ime gụnyere:
• ịghọ onye na-adịghị mma ma ọ bụ na-adịghị ike
• ike ọgwụgwụ na ụbụrụ
• akpụkpọ anụ
• mmụba na ịchọta oyi / ala na-adịghị arụ ọrụ
• ọnụ na-ekpo ọkụ na ume
• isi ọwụwa
• Nsogbu digestive dị ka ọgbụgbọ, nsogbu eri ma ọ bụ afọ ọsịsa
Ihe ọzọ ị ga-atụle gbasara GC bụ ndepụta ogologo nke mmekọrịta ahụ ike / ọgwụ ọjọọ. Ọtụtụ ndị kwesịrị izere garcinia cambogia n'ihi otú o nwere ike isi metụta ọgwụ ndị ọzọ, afọ ime, ọnọdụ edozi, shuga ọbara na ihe ndị ọzọ. Garcinia cambogia nwere ike ime ihe ọjọọ na:
• ime ime na inye nwa
• ọnọdụ ndị dị na imeju ma ọ bụ akụrụ
• ọgwụ ndị a na - ejide iji chịkwaa ụkwara ume ọkụ na allergies
• ọgwụgwọ ọrịa shuga na insulin
• mgbakwunye ígwè (nke ndị mmadụ na-ebute ọrịa anaemia)
• ọgwụ mgbu
• ọgwụ eji ejide nsogbu uche dịka nchekasị na ịda mbà n'obi
• ọgwụ ndị na-eme ka cholesterol belata
• ọgwụ ndị na-etinye ọbara (dị ka aghafarin)
Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ bụ nke sitere na tamarind mkpụrụ ma jiri ya na ọtụtụ mgbakwunye-ere dị ka arọ-ọnwụ raw ntụ ntụ.
Garcinia cambogia (GC) bụ obere mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ na-eto eto n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na India. Ihe na-eme ka ihe dị na mgbatị nke garcinia cambogia bụ hydroxycitric acid (HCA), nke ụfọdụ nnyocha na-egosi na ọ nwere ike inyere ụfọdụ ndị aka ịkwụsị ibu.
Garcinia cambogia reviews, nchọpụta nyocha na ọnụma ihe nlekọ nke ajuju ka agwakọtara na ọ dịkarịa ala. N'ihe dị anya na uru nke ọma site na iji garcinia cambogia bụ ikike ya ime ka ọnwụ dị arọ. Ndị ọzọ na-azọrọ na a na-ejikarị eme ihe banyere garcinia cambogia mmetụta gụnyere:
• enweghi agụụ ma ọ bụ na-enweghi ọchịchọ iri nri karịa ka ọ dị
• belata agụụ maka nri na-adịghị mma, dị ka shuga na-eri ahụ shuga
• ọnọdụ dị mma (gụnyere inwe obi uto, ike gwụrụ na ike gwụrụ)
• mụbaa ike na itinye uche
• na-eme ka ọbara shuga dị elu
• mmeghari obi dị mma
• belata nkwonkwo nkwonkwo
• ọkwa cholesterol dị mma
• ọchịchọ siri ike ịnọ n'ọrụ
Imirikiti ihe ndị a na-ekwu n'elu adịghị enweta nkwado site na nnyocha sayensị, ma ụfọdụ nwere. Ka anyị nyochaa uru nke garcinia cambogia nke nwere ezigbo uru ma yie ka ọ dị irè n'ụzọ ụfọdụ.
1). Ebufu ibu
Ụfọdụ nnyocha achọpụtala na garcinia cambogia nwere ike inye aka na ụba oke mmanụ, gụnyere ụfọdụ nchebara ahụike ndị ọzọ a kpọtụrụ aha n'elu, ọ bụ ezie na irè ya adịghị ike ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta na-egosi na HCA na-arụ ọrụ site na igbochi ụfọdụ enzyme nke a na-akpọ adenosine triphosphate-citrate-lyase, nke na-eme ka e nwee abụba abụba. Ma nchọpụta nke na-atụle mmetụta GC na njikwa na-achọpụta na ọ nwere ike ịba ụba dị arọ site na naanị otu pound abụọ na nkezi.
Nchọpụta ndị a bụ kpọmkwem ihe ndị nchọpụta bipụtara na Journal of Obesity na 2011. Mgbe ha jiri ndị na-ewere Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ nye ndị na-adịghị, ụdị dị arọ dị ntakịrị (na nkezi ihe dịka pound abụọ). Ọzọkwa, ọ gaghị ekwe omume ọbụna kwubie na GC na-akpata kpọmkwem ihe ndị ọzọ furu efu.
Ihe nyocha nke nyocha na nyocha site na 12 dị iche iche dị na GC ma kpughee ntakịrị dị iche iche dị iche iche n'iji ihe ndị na-eme ka ọgwụ na-adọrọ mmasị nke ngwaahịa garcinia nke nwere HCA dị ntakịrị karịa iji ebebo. Otú ọ dị, nchọpụta ahụ chọpụtakwara na ụfọdụ nnyocha gosiri na ọ bụ ihe ọjọọ na-akpata ("ihe ndị na-akpata ọrịa nhụjuanya") bụ ugboro abụọ na HCA dị iche iche ma e jiri ya tụnyere placebo.
Nsonaazụ sitere n'ọmụmụ ihe ọmụmụ ihe dịgasị iche iche na-agụnye GC nwere nnukwu agwakọta. Otu nnyocha na meta-analysis kọrọ ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama na oke abụba na HCA na-atụle na placebo, nnyocha abụọ kọrọ na ọnụ ọgụgụ dị elu na abụba na abụba na abụba / ngwongwo na abụba na HCA na-atụle ebe placebo, mana nchọpụta abụọ ọzọ achọpụtaghị ọdịiche dị oke dị iche n'etiti HCA na placebo. Otu nnyocha nke e bipụtara na Journal of the American Medical Association chọpụtara na GC jiri 12 izu (1,500 milligrams dosage) "emezughị oke ihe dị arọ na ụba oke ihe karịrị nke ahụ na placebo."
Nkwubi nke meta-analysis banyere garcinia cambogia? Ndị nchọpụta chịkọtara ihe ha chọpụtara site n'ikwu na "ịdị ukwuu nke mmetụta ahụ dị ntakịrị, ọ dịghịkwa mkpa ejiri ihe gbasara ahụike. Ọdịnihu ga-adị mma ma kọọrọ ya nke ọma. "Nke bụ isi bụ na ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ịkwụsị ibu, GC ga-abụ na ọ gaghị abụ azịza ya, dị ka ikpe na nchọpụta nchịkwa.
2). Ịkụda Mmasị
Nnyocha na-atụ aro na ọ ga-ekwe omume na HCA dị na garcinia cambogia nwere ike inye aka belata agụụ nke mmadụ site n'ịbawanye mmepụta nke serotonin neurotransmitter, nke jikọtara ya na obi dị jụụ na obi ụtọ - ya mere, mgbe ụfọdụ, mmetụ agụụ na-agụ, agụụ na-agụsi ike ma belata ọchịchọ maka nri nkasi obi . Omumu ihe omumu gosiri na o nwere ike inye aka ime ka onodu ume.
Ma, buru n'uche na nke a abụghị ụdị mmadụ nile, na e nwere ụzọ ndị ọzọ, nke nwere ike ịme ka ọ dịkwuo mfe ijikwa agụụ gị na ịmepụta mmepụta serotonin (dịka iri nri kwesịrị ekwesị na ihe oriri protein na ụlọ ọrụ ahụ ike n'oge n'ụbọchị dum).
3). Cholesterol dị ala
Enwere nkwado maka garcinia cambogia inwe ike melite ọkwa cholesterol ma belata triglycerides. Ọ pụkwara inye aka ịwelite cholesterol HDL "ezigbo". Ọ dịghị mma maka onye ọ bụla na-aṅụ ọgwụ ndị na-emetụta cholesterol, Otú ọ dị, mmetụta ya adịghị ka ọ bụ ezigbo ịdabere ma ọ bụ ike.
Nnyocha achọpụtala na GC "enweghị mmetụta dị ịrịba ama na akụkụ anthropometric, REE, triglycerides ma ọ bụ glucose ọkwa" ma nwere ike inwe ntakịrị mmetụta na ịkụda cholesterol. Buru n'uche na e nwekwara ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ a ga - esi melite ọkwa cholesterol, gụnyere mmega na iri nri ndị na-eri nri site na nri dị elu dị ka veggies, mkpụrụ, mkpụrụ na agwa.
4). Sugar Ọbara Na-edozi
N'ikpeazụ, gịnị banyere mmetụta CG banyere ọbara shuga? Ụfọdụ ihe akaebe na-egosi na garcinia cambogia nwere ike inye aka ịchịkwa shuga ọbara site na imeziwanye ka esi eji glucose (shuga) eme ihe maka ike. Otu uzo o nwere ike isi meziwanye ubu ibu bu site na igbochi aczylase amylase alpha pancreatic, mgbanwe na ogwu alpha glucosidase na ngbanwe na synthetic acid synthesis. Nke a ga-enwe ike ịgbanwe otú carbohydrates si emetụta.
Nke a nwere ike inyere ahụ gị aka ịnabata insulin ka ọ dị mma, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ibute ihe ize ndụ nke inwe oke shuga shuga na ụfọdụ ndị. Ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ihe mere eme nke ọbara shuga, ị na-agwọ ọrịa, ọrịa shuga ma ọ bụ na-aṅụ ọgwụ na-agbanwe mmetụta insulin, GC nwere ike ime ka ọbara shuga gị belata. Ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na onye ọ bụla na-ewe GC, ọ bụ ihe ọzọ ị ga-atụle na ihe gị na dọkịta gị ga-ekwurịta.
Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ Powder Powder (CAS 90045-23-1)
Raw Garcinia cambogia wepụ ntụ ọka Marketing
Ụzọ ịzụta Garcinia cambogia wepụ ntụ ntụ (CAS 90045-23-1) site na AASraw